ဟာဝိုင်အီထိသွားစရာမလိုဘဲ စားရတော့မယ့် ရန်ကုန်မှာတစ်ဆိုင်တည်းရှိတဲ့ ဟာဝိုင်အီထမင်းသုပ်
27 Aug 2018 . 9:41 PM
ဟာဝိုင်အီထမင်းသုပ်တဲ့? တစ်သက်နဲ့တစ်ကိုယ် ရန်ကုန်မှာ တခါမှ မစားဘူး၊ မကြားဘူးတဲ့ အစားအစာကို ဟိုး ဟာဝိုင်အီရောက်မှ စားရမယ်ထင်ရင် မှားပြီသာမှတ်တော့ဗျို့။
ရန်ကုန်မြို့မှာမှ ဓမ္မစေတီလမ်းက Time Link Shopping Mall ထဲမှာ ဟာဝိုင်အီရိုးရာ ထမင်းသုပ်တစ်မျိုးတည်းရောင်းတဲ့ဆိုင်လေး ဒီနေ့မှဖွင့်တာတဲ့။ ဟာဝိုင်အီလူမျိုးတွေစွဲစွဲမြဲမြဲစားကြတဲ့၊ နိုင်ငံခြားသားတွေအရမ်းကြိုက်ကြတဲ့ ဟာဝိုင်အီထမင်းသုပ်က ဘာလို့ဒီလောက်တောင် နာမည်ကြီးလည်း ဆိုတာ သိချင်ကြပြီဆိုရင် အခရာနဲ့ လိုက်စားလိုက်ကြစို့။
ထမင်းကို အသားတွေ၊ အသီးတွေအပြင်၊ ဆော့စ်နဲ့ အပေါ်က Topping လေးတွေထည့်ပြီး နယ်ဖတ်စားရတဲ့ ထမင်းသုပ်မျိုးပေါ့။ ထူးဆန်းတာက ဒီထမင်းသုပ်ထဲမှာ အသီးတွေပါထည့်သုပ်ကြတာတဲ့။ အရသာမရှိလောက်ဘူး၊ မစားတတ်လောက်ဘူးထင်တဲ့ ကိုယ်တွေလို အစားတလိုင်းတောင် ကြွေသွားရအောင် အရသာဆန်းဆန်းလေးနဲ့ ကောင်းသဗျား။
ဆိုင်လေးနာမည်က The Poke Bar တဲ့။ U.S.A ကနေ Franchise လုပ်ထားတဲ့ ဒီဆိုင်လေးမှာ ထမင်းသုပ်တစ်မျိုးတည်းကို ဟာဝိုင်အီ အရသာမျိုး သုပ်ပြီးနယ်ဖတ်စားရတာ။
ကဲ…စားချင်လှပါပြီတဲ့။ အရသာရှိတဲ့ထမင်းသုပ်လေးရဖို့ ဆိုင်မှာ ဘယ်လိုမှာပြီး ဘယ်လိုရွေးချယ်ရမလဲဆိုတာ အခရာက ပြောပြပေးမယ်နော်။
(၁) ပထမဆုံးက အသားကိုရွေးရတာ။ သူတို့ဆီမှာ ကြက်သားက ၅၀၀၀ နဲ့ဈေးအနည်းဆုံးပဲ။ အဲ့အသားနဲ့ဈေးနှုန်းက တစ်ပွဲစာလုံးဈေးနှုန်းကိုပြောတာတဲ့။ ကျန်တာတွေထပ်ထည့်တွက်စရာမလိုတော့ဘူး။ တခြား ပုစွန်၊ တူနာ၊ ဆယ်လ်မွန်၊ တိုဖူးတို့လည်းရှိတယ်။ ပွဲအသေး၊ အကြီးလည်း ရွေးလို့ရတယ်။
(၂) ပြီးရင်ထမင်းရွေးရတယ်။ ထမင်းညိုနဲ့ အဖြူ ၂မျိုးရတယ်။ Diet သမားတွေ၊ Healthy Meal စားချင်သူတွေကတော့ အညိုရွေးပေါ့။ ကိုယ်တွေကတော့ အကောင်းကြိုက်တော့ ဆန်စေးစေးဖြူဖြူလေးမှ။
(၃) ပြီးရင် ကိုယ်ထည့်မယ့်အသီးရွေးရမယ်။ စပ်စပ်လေးကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ ငရုတ်သီးစိမ်းလေးပါအောင်ရွေးနော်။ ထောပတ်သီး၊ သရက်၊ နာနတ်၊ ပဲစိမ်းတောင့်၊ ရေညှိ၊ ကြက်သွန်နီကွင်း၊ သခွားသီး၊ မုန်လာဥနီကြိုက်တဲ့ အမျိုး ၅ မျိုးရွေးရတယ်။
(၄) ဒီတခါဆော့စ်ရွေးကလှည့်။ ရိုးရိုးအဆိမ့်လေး၊ ကလေးတွေအတွက်ဆို Classic Citrus။ စပ်စပ်၊ လေးလေး၊ ဆိမ့်ဆိမ့်လေးဆို Spicy Aioli ၊ နှမ်းဆီနဲ့ ရှိန်းတိန်းတိန်းလေးဆို Sesame Ginger၊ ပူပူစပ်စပ်ဆို Vocalno၊ ဝါဆာဘီကြိုက်ရင် Wasabi Aioli ၊ တခြား Teriyaki ၊ Kimchi အရသာအစုံလင်ပဲ။ ကိုယ်ကတော့ စပ်စပ်လေးစားချင်ရင်တော့ Spicy Aioli မှာခဲ့တယ်။ ရွေးချယ်မှုကတော့ သိပ်မှန်ပဲ။
(၅) အပေါ်က ထည့်ဖို့ Topping ၂မျိုးရွေးရတဲ့ထဲမှာ Tempura အကြော်လေးတွေရယ်၊ ငါးဥရယ်၊ ကြက်သွန်ကွင်းကြော်နဲ့ နှမ်းလေးတွေထဲက ရွေးရတယ်။ ကိုယ်ကတော့ ငါးဥနဲ့ တန်ပူရာကြော်လေးရွေးလိုက်တယ်။
ကဲ…ခနနေတော့ ရောက်ချလာပါပြီ။ အရောင်စုံ၊ အနှစ်တွေအိနေတဲ့ ထမင်းသုပ်ပွဲလေး။ ပုံထဲကအတိုင်း ကိုယ့်မျက်စိရှေ့ရောက်ချလာတာ။ အဲ့ချိန်ထိ ဘယ်လိုအရသာမျိုးလဲလို့ သိချင်စိတ်ကအငမ်းမရပဲ။
ဓါတ်ပုံရိုက်ပြီး မွှေတယ်။ ရောတယ်။ သမတယ်။ နောက်ဆုံးနှံ့ပြီထင်လို့ စားကြည့်လိုက်မှ အိုးးးးးထမင်းစေးစေးလေးကို mustard လိုဆော့စ်ဆိမ့်ဆိမ့်စပ်စပ်လေးနဲ့ ရေညှိတွေ ထောပတ်၊ သရက်၊ နာနတ်သီးတွေရောတဲ့အချိုလေးရယ်၊ငါးဥလေးတွေက ဝါးလိုက်တိုင်းတဖောက်ဖောက်နဲ့ အလွန်အကျူးပဲ။ အရသာအားလုံးပါးစပ်ထဲပျော်ဝင်သွားတော့မှ တကယ့် လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် ကျန်းမာရေးနဲ့ညီတဲ့ထမင်းသုပ်တစ်ပွဲကို ကြွေမိတော့တယ်။ ဆော့စ်က တကယ့်အသက်ပဲ။ဆိမ့်ဆိမ့်လေးလေးစပ်စပ်ကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက် လုံးဝ အထိအမိအငြိပဲ။ ဆော့စ်လိုရင်လည်း ထပ်တောင်းရင် ထည့်ပေးသေးတယ်။
တကယ်ပါ။ Diet သမားတွေ၊ လုံးဝသန့်ရှင်းပြီး ကျန်းမာရေးနဲ့ညီတဲ့ အစားအစာကိုမှ စားချင်တဲ့သူတွေအတွက် လုံးဝ Recommend ပေးပါတယ်။ ဈေးတော့ ပုံမှန် ထမင်းတစ်ပွဲထက်စာရင် ဈေးကြီးတယ်ထင်ရတယ်။ ဒါပေမယ့် တိုဟူး၊ ကြက်နဲ့ ပုစွန်ကတော့ ဈေးသက်သာတယ်ပြောရမယ်။ တူနာနဲ့ ဆယ်လ်မွန်က တစ်သောင်းဝန်းကျင်နားရောက်သွားပြီလေ။ ဒါပေမယ့် အသားတွေလတ်ဆတ်တယ်။
အဓိကက တစ်ဆိုင်လုံး သန့်ပြန့်နေတာပဲ။ ဝန်ထမ်းကောင်မလေးတွေကိုက အစ သန့်ရှင်းရေးကို သေချာဂရုစိုက်ထားပေးတယ်။ စားပွဲလေးတွေနဲ့ ဆိုင်လေးကကျဉ်းပေမယ့် တော်တော်သန့်ပြီး လင်းလင်းထင်းထင်းထိုင်လို့ကောင်းတယ်။ Healthy Meal ကြီးတွေကို အရသာမရှိဘဲ ဒုက္ခခံစားနေရတဲ့သူတွေအတွက် ဒီဟာဝိုင်အီထမင်းသုပ်လေးက တကယ့် နတ်အစားစာပဲလို့ ညွှန်းချင်မိတယ်။
လင့်လမ်းနဲ့ဓမ္မစေတီလမ်းထောင့်က Time Link Shopping Mall အလယ် Krispy Kreme ဆိုင်နောက်ဘက်မှာ The Poke Bar ဆိုတဲ့ ဟာဝိုင်အီထမင်းသုပ်ဆိုင်လေးရှိတယ်နော်။ မနက် ၁၀နာရီကနေ ည ၉ လောက်ထိဖွင့်တယ်တဲ့။
ဟာဝိုင်အီမရောက်ဖူးသေးသရွေ့တော့ ရန်ကုန်မှာ ဟာဝိုင်အီထမင်းသုပ်ဆိုင်လေးရောက်တုန်း တစ်သက်မှာတစ်ခါ ဟာဝိုင်အီရောက်နေတယ်အမှတ်နဲ့ စိတ်ကူးယဉ်ပြီး စားကြည့်လိုက်ပါဦးဗျို့။
ဟာဝိုငျအီထိသှားစရာမလိုဘဲ စားရတော့မယျ့ ရနျကုနျမှာတဈဆိုငျတညျးရှိတဲ့ ဟာဝိုငျအီထမငျးသုပျ
ဟာဝိုငျအီထမငျးသုပျတဲ့? တဈသကျနဲ့တဈကိုယျ ရနျကုနျမှာ တခါမှ မစားဘူး၊ မကွားဘူးတဲ့ အစားအစာကို ဟိုး ဟာဝိုငျအီရောကျမှ စားရမယျထငျရငျ မှားပွီသာမှတျတော့ဗြို့။
ရနျကုနျမွို့မှာမှ ဓမ်မစတေီလမျးက Time Link Shopping Mall ထဲမှာ ဟာဝိုငျအီရိုးရာ ထမငျးသုပျတဈမြိုးတညျးရောငျးတဲ့ဆိုငျလေး ဒီနမှေ့ဖှငျ့တာတဲ့။ ဟာဝိုငျအီလူမြိုးတှစှေဲစှဲမွဲမွဲစားကွတဲ့၊ နိုငျငံခွားသားတှအေရမျးကွိုကျကွတဲ့ ဟာဝိုငျအီထမငျးသုပျက ဘာလို့ဒီလောကျတောငျ နာမညျကွီးလညျး ဆိုတာ သိခငျြကွပွီဆိုရငျ အခရာနဲ့ လိုကျစားလိုကျကွစို့။
ထမငျးကို အသားတှေ၊ အသီးတှအေပွငျ၊ ဆော့ဈနဲ့ အပျေါက Topping လေးတှထေညျ့ပွီး နယျဖတျစားရတဲ့ ထမငျးသုပျမြိုးပေါ့။ ထူးဆနျးတာက ဒီထမငျးသုပျထဲမှာ အသီးတှပေါထညျ့သုပျကွတာတဲ့။ အရသာမရှိလောကျဘူး၊ မစားတတျလောကျဘူးထငျတဲ့ ကိုယျတှလေို အစားတလိုငျးတောငျ ကွှသှေားရအောငျ အရသာဆနျးဆနျးလေးနဲ့ ကောငျးသဗြား။
ဆိုငျလေးနာမညျက The Poke Bar တဲ့။ U.S.A ကနေ Franchise လုပျထားတဲ့ ဒီဆိုငျလေးမှာ ထမငျးသုပျတဈမြိုးတညျးကို ဟာဝိုငျအီ အရသာမြိုး သုပျပွီးနယျဖတျစားရတာ။
ကဲ…စားခငျြလှပါပွီတဲ့။ အရသာရှိတဲ့ထမငျးသုပျလေးရဖို့ ဆိုငျမှာ ဘယျလိုမှာပွီး ဘယျလိုရှေးခယျြရမလဲဆိုတာ အခရာက ပွောပွပေးမယျနျော။
(၁) ပထမဆုံးက အသားကိုရှေးရတာ။ သူတို့ဆီမှာ ကွကျသားက ၅၀၀၀ နဲ့ဈေးအနညျးဆုံးပဲ။ အဲ့အသားနဲ့ဈေးနှုနျးက တဈပှဲစာလုံးဈေးနှုနျးကိုပွောတာတဲ့။ ကနျြတာတှထေပျထညျ့တှကျစရာမလိုတော့ဘူး။ တခွား ပုစှနျ၊ တူနာ၊ ဆယျလျမှနျ၊ တိုဖူးတို့လညျးရှိတယျ။ ပှဲအသေး၊ အကွီးလညျး ရှေးလို့ရတယျ။
(၂) ပွီးရငျထမငျးရှေးရတယျ။ ထမငျးညိုနဲ့ အဖွူ ၂မြိုးရတယျ။ Diet သမားတှေ၊ Healthy Meal စားခငျြသူတှကေတော့ အညိုရှေးပေါ့။ ကိုယျတှကေတော့ အကောငျးကွိုကျတော့ ဆနျစေးစေးဖွူဖွူလေးမှ။
(၃) ပွီးရငျ ကိုယျထညျ့မယျ့အသီးရှေးရမယျ။ စပျစပျလေးကွိုကျတဲ့သူတှအေတှကျတော့ ငရုတျသီးစိမျးလေးပါအောငျရှေးနျော။ ထောပတျသီး၊ သရကျ၊ နာနတျ၊ ပဲစိမျးတောငျ့၊ ရညှေိ၊ ကွကျသှနျနီကှငျး၊ သခှားသီး၊ မုနျလာဥနီကွိုကျတဲ့ အမြိုး ၅ မြိုးရှေးရတယျ။
(၄) ဒီတခါဆော့ဈရှေးကလှညျ့။ ရိုးရိုးအဆိမျ့လေး၊ ကလေးတှအေတှကျဆို Classic Citrus။ စပျစပျ၊ လေးလေး၊ ဆိမျ့ဆိမျ့လေးဆို Spicy Aioli ၊ နှမျးဆီနဲ့ ရှိနျးတိနျးတိနျးလေးဆို Sesame Ginger၊ ပူပူစပျစပျဆို Vocalno၊ ဝါဆာဘီကွိုကျရငျ Wasabi Aioli ၊ တခွား Teriyaki ၊ Kimchi အရသာအစုံလငျပဲ။ ကိုယျကတော့ စပျစပျလေးစားခငျြရငျတော့ Spicy Aioli မှာခဲ့တယျ။ ရှေးခယျြမှုကတော့ သိပျမှနျပဲ။
(၅) အပျေါက ထညျ့ဖို့ Topping ၂မြိုးရှေးရတဲ့ထဲမှာ Tempura အကွျောလေးတှရေယျ၊ ငါးဥရယျ၊ ကွကျသှနျကှငျးကွျောနဲ့ နှမျးလေးတှထေဲက ရှေးရတယျ။ ကိုယျကတော့ ငါးဥနဲ့ တနျပူရာကွျောလေးရှေးလိုကျတယျ။
ကဲ…ခနနတေော့ ရောကျခလြာပါပွီ။ အရောငျစုံ၊ အနှဈတှအေိနတေဲ့ ထမငျးသုပျပှဲလေး။ ပုံထဲကအတိုငျး ကိုယျ့မကျြစိရှရေ့ောကျခလြာတာ။ အဲ့ခြိနျထိ ဘယျလိုအရသာမြိုးလဲလို့ သိခငျြစိတျကအငမျးမရပဲ။
ဓါတျပုံရိုကျပွီး မှတေယျ။ ရောတယျ။ သမတယျ။ နောကျဆုံးနှံ့ပွီထငျလို့ စားကွညျ့လိုကျမှ အိုးးးးးထမငျးစေးစေးလေးကို mustard လိုဆော့ဈဆိမျ့ဆိမျ့စပျစပျလေးနဲ့ ရညှေိတှေ ထောပတျ၊ သရကျ၊ နာနတျသီးတှရေောတဲ့အခြိုလေးရယျ၊ငါးဥလေးတှကေ ဝါးလိုကျတိုငျးတဖောကျဖောကျနဲ့ အလှနျအကြူးပဲ။ အရသာအားလုံးပါးစပျထဲပြျောဝငျသှားတော့မှ တကယျ့ လတျလတျဆတျဆတျ ကနျြးမာရေးနဲ့ညီတဲ့ထမငျးသုပျတဈပှဲကို ကွှမေိတော့တယျ။ ဆော့ဈက တကယျ့အသကျပဲ။ဆိမျ့ဆိမျ့လေးလေးစပျစပျကွိုကျတဲ့သူတှအေတှကျ လုံးဝ အထိအမိအငွိပဲ။ ဆော့ဈလိုရငျလညျး ထပျတောငျးရငျ ထညျ့ပေးသေးတယျ။
တကယျပါ။ Diet သမားတှေ၊ လုံးဝသနျ့ရှငျးပွီး ကနျြးမာရေးနဲ့ညီတဲ့ အစားအစာကိုမှ စားခငျြတဲ့သူတှအေတှကျ လုံးဝ Recommend ပေးပါတယျ။ ဈေးတော့ ပုံမှနျ ထမငျးတဈပှဲထကျစာရငျ ဈေးကွီးတယျထငျရတယျ။ ဒါပမေယျ့ တိုဟူး၊ ကွကျနဲ့ ပုစှနျကတော့ ဈေးသကျသာတယျပွောရမယျ။ တူနာနဲ့ ဆယျလျမှနျက တဈသောငျးဝနျးကငျြနားရောကျသှားပွီလေ။ ဒါပမေယျ့ အသားတှလေတျဆတျတယျ။
အဓိကက တဈဆိုငျလုံး သနျ့ပွနျ့နတောပဲ။ ဝနျထမျးကောငျမလေးတှကေိုက အစ သနျ့ရှငျးရေးကို သခြောဂရုစိုကျထားပေးတယျ။ စားပှဲလေးတှနေဲ့ ဆိုငျလေးကကဉျြးပမေယျ့ တျောတျောသနျ့ပွီး လငျးလငျးထငျးထငျးထိုငျလို့ကောငျးတယျ။ Healthy Meal ကွီးတှကေို အရသာမရှိဘဲ ဒုက်ခခံစားနရေတဲ့သူတှအေတှကျ ဒီဟာဝိုငျအီထမငျးသုပျလေးက တကယျ့ နတျအစားစာပဲလို့ ညှနျးခငျြမိတယျ။
လငျ့လမျးနဲ့ဓမ်မစတေီလမျးထောငျ့က Time Link Shopping Mall အလယျ Krispy Kreme ဆိုငျနောကျဘကျမှာ The Poke Bar ဆိုတဲ့ ဟာဝိုငျအီထမငျးသုပျဆိုငျလေးရှိတယျနျော။ မနကျ ၁၀နာရီကနေ ည ၉ လောကျထိဖှငျ့တယျတဲ့။
ဟာဝိုငျအီမရောကျဖူးသေးသရှတေ့ော့ ရနျကုနျမှာ ဟာဝိုငျအီထမငျးသုပျဆိုငျလေးရောကျတုနျး တဈသကျမှာတဈခါ ဟာဝိုငျအီရောကျနတေယျအမှတျနဲ့ စိတျကူးယဉျပွီး စားကွညျ့လိုကျပါဦးဗြို့။